Ezemvelo mag zulu by Marc Russell Abbott - issuu
InkanyeziUmfumfu - Uzibandlela 2010 - Official Newsletter1 |	ABAQAPHI BEMVELO BAKHELWE
IZINDLU ZIKANOKUSHO2 |	I-EZEMVELO ILOGO YETHU3 |	LUNCONYWE KAKHULU UHLELO
LOKWAKHIWA KWEZIBAYA4 |	Abakwa-Mondi Paper kanye nabakwa-Waltons belule isandla
nokuzingelwa koBhejaneReport poaching: 08600 10111Umfumfu - Uzibandlela 2010
Stay anonymous and report those responsible for poaching.
They are stealing your children’s heritageUmbono, Injongo kanye neziMiso eziBalulekile
Umbono“Ukuba ngungqaphambili kwezokongiwa kwemvelo ehlukahlukene emhlabeni”•	Injongo
“Ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi
wokongiwa kwemvelo wenziwa
kahle futhi ukongiwa kwemvelo yaKwaZulu-Natali kwenziwa ngokubambisana nezinhlaka
zethu, ukuze kuhlomule isizukulwane samanje nesangomuso”Izimiso
eziBalulekileOKUQUKETHWE•	Ukwethembeka – ngaso sonke
isikhathi sisebenza ngokwethembeka, senze ngendlela
efanele kanye nangeqiniso.
•	Inhlonipho– sibekezelela izinhlaka esisebenzisana nazo,
amalungelo azo kanye nawendalo.
•	Ukubika– sibambisana nezinh-•	•	•	•	laka zethu ezinhlelweni zenhlangano ngokuvuleleka kanti
futhi siyakwazi ukuphendula
Ukusebenza ngokubambisana– sisebenza ngokubambisana ukufezekisa umbono wethu
ejwayelekayo esebenzisa isiko
lokwamukela imibono emisha
Ukwenza kahle kakhulu- siyinhlangano enenqubekela
phambili futhi esebenza
kahle ukuzuza okusezingeni
sonke isikhathi senza umsebenzi wethu ngothando,
ngendlela esheshayo futhi
UMhleli oyiNhloko UDkt Bandile Mkhize
Ithimba lezindaba UMaureen Zimu,
kanye noMusa Mntambo
Imisebenzi yeziLimi UPhilani Ncalane
neziThombe Ngabe Mediacom SAInkanyezi
langaphakathi eliphuma ngekota yonyaka kanti lishicilelwa
kwa-Ezemvelo KZN Wildlife
(Ezemvelo). Amalungelo akho
konke okushicilelwe agodliwe
kanti akumele kusetshenziswe
ngaphandle kwemvume ebhalwe phansi yoMhleli oyiNhloko.
Niyacelwa ukuba nithumele izindaba
ezizongena kuleli phephabhuku kwiemail ethi:mntambom@kznwildlife.
com nakwethi: maureen@kznwildlife.
com kanti usuku olungumnqamlajuqu
lokuthunyelwa kwezindaba ngumhla
ziyi-19 kuNdasa ka-2011.ABASEBENZI BEZEMVELO
AHLUKAHLUKENEIkhasi lesi-2Umbono, iziNjongo kanye neziMiso eziMqokaIkhasi lesi-3Amazwi oMphathi oMkhuluIkhasi lesi-4Izindlu ezintsha ceke zabaQaphi beMveloIkhasi lesi-5Ilogo yezeMvelo kanye nomcimbi wama-PRM AwardIkhasi lesi-6Imidlalo ye-Ezemvelo Cup ka-2010Ikhasi lesi-7Umkhankaso wokulwa nokubulawa kobhejane nombiko wamaholidi kaKhisimuziIkhasi lesi-8Izinhlelo zokuqeqesha abaQaphi beMvelo besifazane kanye noHlelo lweziBayaIkhasi lesi-9AbakwaMondi nabakwa-Waltons bayekelela iEzemveloIkhasi le-10I-Ezemvelo itakula abafundi basemaNyuvesiIkhasi le-11Ukusayinwa kwesiVumelwano sokuphatha ngokubambisanaINKANYEZIIlungelo
lokuShicilela2Official NewsletterAMAZWI OMPHATHI OMKHULUUDkt Bandile MkhizeKuningi
lweNkanyezi! Uthando lwebhola seluthanda ukwehla kodwa
kuyintokozo kimina ukusho
ukuthi isasasa ngemidlalo yeEzemvelo Cup lisalokhu lilikhulu
kakhulu. Okuningi ngale midlalo
uzokuthola ngaphakathi kulolu
Izindawo zethu zokulala zenze
inzuzo enhle kakhulu njengoba
zingenise u-R30 million okuyingeniso ebesiyidinga kakhulu.
bethu boPhiko lokwamukelwa
kwezivakashi ngaphansi koMnyango wezokuKhangiswa kweBhizinisi, ngithi ukwanda kwaliwa
ngumthakathi. Akukaze kube
lula ukusebenza uma kubukeka
sengathi umhlaba wonke usemaholidini. Siphinde saba namaholidi kaKhisimuzi angenazigameko.
Okubuhlungu nje yikhona ukuthi kuminze izivakashi ezimbili
eSodwana Bay kodwa-ke ezinye
izindawo zethu zibe namaholidi
Peak babike izigameko ezingatheni kanti bezidalwa yizimvula ezinamandla kakhulu.
kudale ukuthi kungahambeki
emgwaqeni ongena e-Cathedral
Peak kanti ngemuva kokuba
usulungisiwe umonakalo, kuvele ukuthi kunemisele ephazamisayo eMike eholele ekutheni
kuvalwe umgwaqo kuze kube
onjiniya bamemezela ngokusemthethweni ukuthi uphephile.
Iqulu labatshuzi liyiswe endaweni ephephile ngemuva kukudla
izindwane komfula e-CathedralPeak kanti omunye ubesendleleni eyohlangana nozakwabo ngesikhathi kwenzeka lokhu kanti
usheshe watholakala ngemuva
kokucingwa ngendiza enophephela eqolo wahlanganiswa nozakwabo.
Ngenyanga kaZibandlela onyakeni odlule, kusayinwe isivumelwano sokuphatha iziqiwi
kwe-Ezemvelo nabaholi bemiphakathi engomakhelwane bezindawo ezivikelekile.
Imibiko yokuqala ethinta uhlelo lokuqashelwa kwezimfudu
zasolwandle oluseBhanga Nek
eduze kwaseKosi Bay iveza ukuthi, isizini yokuzalela kwezimfudu ibe yinhle kakhulu njengoba kuchanyiselwe izilingozi
ezingu-2085 kanye nazavungu
ezingu-167. Ithimba lase-Nelson
Mandela Metropolitan University, abe-Ezemvelo KZN Wildlife
kanye naboPhiko lokuPhathwa
kwezindawo ezisoGwini loLwandle loMnyango wezeMvelo,
bacuphe imishini yokuhlola izilingozi eziyisithupha ngasekuqaleni kwenyanga kaZibandlela
ka-2010 kuya phakathi kukaMasingana ka-2011. Imishini ikhombise ukuthi seqedile ukuzalela
kanti izilingozi zesifazane zonke
zinikele ezindaweni ezisenhla
Uhlelo olufanayo lwaphambilini,
luveze ukuthi abhekise amabombo ezindaweni lapho ezokwazi khona ukuthola ukudla,
okuyindawo esogwini lwaseKenya, eTanzania kanye naseSomalia.
Olunye uhlelo olube yisimanga,
ngoluthinta ukudedelwa kwamankentshane ase-Afrika ayi14 eTembe Elephant Park mhla
ziyi-11 kuMasingana ka-2011.
La mankentshane abevalelwe
isikhathi esilinganiselwa onyakeni kanti abemanqika ukushiya
lapho abevalelwe khona. Ngemuva kokuba amankentshane
ambalwa ekhombise isibindi,
wonke abe eselandela. Umbiko
ukhomba ukuthi amankentshane
aqhuba kahle futhi ayakuthakasela ukuba sendaweni entsha. Ukwazi kabanzi ngendawo
ahlala kuyona kumqoka kakhulu
njengoba ekusebenzisa uma es-3ezingela.
Okunye okubaluleke kakhulu
waseMozambique ususayine isiVumelwano sokuSebenzisana
ngenhloso yokwelula isandla
ezinhlelweni zokuvikelwa kwamankentshane kanti lokhu kuzohlomulisa indawo yokongiwa
kwemvelo esemngceleni wala
mazwe ehlanganisa ingxenye esenhla yeKwaZulu-Natali neMaputo Elephant Reserve.
Kufezekiswe iphupho leminyaka
ngesikhathi i-Ezemvelo ithola
uxhaso lwebhasi oluvela kwabeSpringbok Atlas. Ukuba khona
kwaleli bhasi kuzosiza kakhulu
ekufuqeni umkhankaso wethu
kwemvelo ikakhulukazi uma sisebenza nemiphakathi kwazise
izinto zokuhamba zivamise ukuntuleka. Sesizokwazi ukuthutha
abasebenzi ukuhambela imicimbi yomphakathi okanye ukuthutha umphakathi ukuhambela
imicimbi yethu. Noma ungakuchaza kanjani kodwa lokhu kuwuhlelo oluhle kakhulu. Lokhu kuyisibonelo esihle lapho abebhizinisi
elizimele bekhombisa ukweseka
kwenyanga kaMfumfu onyakeni odlule, ithimba le-Ezemvelo livakashele eKruger Park
ngenhloso yokuyofunda kanye
nokucathulisana kwezemidlalo. Abasebenzi bethu bamazinga
ehlukahlukene, bahlangane nozakwabo baseKruger Park lapho
bethole khona ithuba lokucobelelana ngolwazi. Ithimba lethu
labaqaphi bemvelo lizovakashela
khona eKruger Park liyoncela
ulwazi kubasebenzi bakhona
liphinde libacobelele ngolwazi
ngokusemthethweni ngoMfumfu ka-2010, ngoloMakhelwane/
uHlelo lokuSiza imiPhakathi
eHlwempu okuhloswe ngalo
ukusiza labo abebesebenzela
i-Ezemvelo phambilini kodwa
futhi olungabashiyi ngaphandle
abasebenzi abakhona njengamanje okubonakala ukuthi badinga usizo. Kuphinde kusizwe
ngalo imiphakathi engomakhelwane beziqiwi zethu. Inhlosongqangi yalolu hlelo wukubambaiqhaza ekuthuthukisweni kwemiphakathi yasemakhaya kanye
nokulwa nendlala. Kuze kube
yimanje, ingaphezulu kweshumi
imindeni kanye nemiphakathi
engomakhelwane beziqiwi zethu
esihlomulile kulolu hlelo. Ngithanda ukuncoma kakhulu abaxhasi bethu bakwaBoxer kanye
nabakwa-Albaraka Bank abanikele ngezimpahla ezinikezwe
lemindeni kanye nemiphakathi
Ukubuyela emidlalweni yeEzemvelo Cup, isibe yithuluzi
elimqoka kabi emkhankasweni wethu wokuzazisa emphakathini nokuyazisa ngemisebenzi esiyenzayo. Ngaphandle
kokunikeza abasebenzi bethu
ithuba eliyingqayizivele lokuxhumana namakilabhu kanye
ngezemidlalo kanye nempilo
nje, isihlinzeke ngethuba elikahle
lokwazisa umphakathi ngezinhlelo zethu. Angicabangi ukuthi
ngizokube ngizithwala uma ngiveza ukuthi imiphakathi engomakhelwane bethu, isisiqonda
kangcono manje kunaphambilini. Lokhu kubuyisa isithombe
esiyiqiniso emqondweni ngezinto eziningi ebezishiwo ngathi
eminyakeni eminingi edlule,
ukuthi ngaphandle kokwesekwa
yimiphakathi, ukongiwa kwemvelo kanye nezindawo ezivikelekile ngeke kuye ndawo. Njengamanje ngingakusho kugcwale
umlomo ukuthi sesikwazile ukuqinisa ukwesekwa kwethu emazingeni aphansi ngenxa yeMidlalo
yeNdebe yoMhlaba kanye nemidlalo ye-Ezemvelo Cup.
Ukuzingelwa kobhejane kusalokhu kuyinkinga kakhulu
kanti njengoba ngike ngasho
phambilini ukuthi sinabasebenzi
abazinikele ukulwa nalo mkhuba
futhi sesakhe ubudlelwano obuhle nezinye izinhlangano kuleli.
Akumele siphonse ithawula emkhankasweni wethu wokulwa
Sengiphetha, ngithanda ukufisela bonke ozakwethu unyaka
ka-2011 onezibusiso futhi ngiyanikhuthaza ukuba niqinisekise
ukuthi nenza konke okuzokwenza ukuthi lo nyaka uhlale ukhumbuleka.Conservation, Partnerships & EcotourismUmfumfu - Uzibandlela 2010ABAQAPHI BEMVELO
BAKHELWE IZINDLU ZIKANOKUSHO
I-Ezemvelo KZN Wildlife yakhele
abaqaphi bemvelo abasebenza eHluhluwe-iMfolozi Park (HIP) izindlu
zikanokusho. Lezi zindlu ezintsha ceke,
zivulwe ngokusemthethweni nguMphathi
oMkhulu uDkt Bandile Mkhize mhla ziyi16 kuZibandlela ka-2010 khona e-HIP.
Phambilini abaqaphi bemvelo bebehlala
ezindlini ezincane abebepheka baphinde
balale kuzona. Ngaphezu kwalokhu, bekumele basebenzise izindlu zangasese
ezingaphandle obekuyingozi kakhulu ikakhulukazi ebusuku njengoba lesi siqiwi
sinezilwane ezinhlanu ezinamandla.
Ngenxa yalezi zimo, i-Ezemvelo izibophezele ukwakhela abaqaphi bemvelo
izindlu ezisezingeni eliphezulu. UMkhize
unxuse abaqaphi bemvelo ukuba basebenze ngokuzikhandla kulo msebenzi
“Manje asisekho nhlobo isidingo sokuthi
nisebenze ngokudembesela. Ngiyathemba ukuthi nizozinikela ngokuphindiwe.
Ngiyaninxusa ukuba nizinakekele kahle
lezi zindlu njengoba sitshale imali eshisiwe ohlelweni lokwakhiwa kwazo,” kusho
UMkhize ujabule kabi ebona uMpume
Ngcobo ongumqaphi wemvelo wesifazane osemncane osebenzisana kahle
“Kumele unxenxe nabanye abantu besifazane ukuba bezokwenza lo msebenzi.
Ngiyathemba ukuthi bazokuba nentshisekelo ngoba usubacentele indlela.
Sibadinga kakhulu abaqaphi bemvelo
besifazane kanti lokhu kuyindlela yokudala amathuba emisebenzi ikakhulukazi
kulabo abangomakhelwane beziqiwi
zethu,” kuqhuba uMkhize.
Uphinde wagcizelela kubaqaphi bemvelo
ukuba bangabi namusa ezigebengwini
ezizingela obhejane. UMkhize uthe izwe
lonke lithembele kubaqaphi bemvelo
ukuba bahlenge obhejane kulezi zigila
mkhuba.INKANYEZIIzindlu ezindala zabaQaphi beMvelo4Official NewsletterUTHI BEWAZI?
ILOGO YETHU (Igama lethu
elisemthethweni)ILogo ye-Ezemvelo KZN Wildlife yakhiwe ngehawu leSizwe samaZulu kanye nomkhombe.
•	Ihawu limele ukuthi lisetshenziswa yiSizwe samaZulu ukuzivikela kanti lapha
•	Umkhombe uhlonzwe njengohlobo lwesilwane olusengcupheni yokushabalala
okudinga ukuba luvikelwe kakhulu.
Udwetshwe ngendlela ekhombisa ubuqhawe bokukwazi ukudlubulundela ubheke
phambili. Lokhu kunguphawu olukhombisa kabanzi ngenhlangano oyimele. Kokubili,
ihawu nomkhombe kumele ukuvikelwa kwayo yonke imvelo yasendle.ISIQUBULO
Isiqubulo siyithuluzi elimqoka lokukhangisa inhlangano ukuze ibekeke ngendlela
ekahle kumakhasimende ayo.Imisebenzi eyenziwa yi-Ezemvelo KZN Wildlife
•	uKongiwa kweMvelo, ubuDlelwano nezinhlaka kanye nezokuVakasha, kuhlinzeka
umphakathi ngemisebenzi ewumgogodla eyenziwa yinhlangano.
Ukusetshenziswa kwezihloko zemisebenzi yenhlangano kumele kwenziwe emibhalweni kanye nakumathuluzi okumaketha nokukhangisa. Kumele kuvele kwi-Tohoma
Regular njalo ngaphansi kwelogo ye-Ezemvelo KZN Wildlife.PMR AwardsAbasebenzi be-Ezemvelo
KZN Wildlife kanye noMphathi oMkhulu uDkt
Bandile Mkhize (ongowesi-4
kwabami ngaphambili) bamukele imiklomelo emithathu ebivela
I-Ezemvelo KZN Wildlife ikhale
yemuka nemiklomelo emithathu ehlanganisa amaGolide
ama-2 okwenza umsebenzi
ukongiwa kwemvelo kanti enye
itholwe iNtshondwe Camp eseThala Game Reserve ngokuba
nama-Lodge asezingeni eliphezulu. Umklomelo wesithathu
ngokuba yindawo ephambili
evikelekile esiFundazweni.5Conservation, Partnerships & EcotourismUmfumfu - Uzibandlela 2010IBIDLE NGOKUKHANGA
I-EZEMVELO CUP KA-2010IIMpukunyoni Netball teamqembu lebhola lezinyawo
iMhlana kanye nelomnqakiswano iMpukunyoni bazondiza ngebhanoyi lakwa-Kulula.
com balibangise eGoli ngemuva
kokudla umhlanganisa emidlalweni ye-Ezemvelo Cup ka-2010.
IMhlana ihlule iMpembeni ngo4-1 sekukhahlelwa amaphenathi
kanti iMpukunyoni inenebule
IMhlana ikhale yemuka noR12 000, inkomishi, izindondo
nejezi kanti izochitha impelasonto e-Protea Hotel, eGoli
kanti izindleko zizokhokhwa
yi-Ezemvelo KZN Wildlife nabakwa-Kulula.com.
izofika eGoli idlale nekilabhu
kubangwa umklomelo osazodalulwa.
UPhakamani Ngxongo uqokwe nguClive Barker oben-gumqeqeshi weBafana Bafana njengomdlali ovelele kulo
mqhudelwano kanti uhlomule
ngo-R1000. Usethubeni elihle
lokuyozama inhlanhla kuMaZulu FC. IMpembeni ithole
u-R7000, izindondo kanye
nejezi kanti iMatshamnyama
igoduke no-R5000 ngokulala
Ebholeni lomnqakiswano, iMpukunyoni ithole u-R7000,
inkomishi, izindondo kanye
nohambo olubheke eGoli.
kowamanqamu kanti iMadlankala inikwe u-R4000 ngokulala isithathu. USamkelisiwe
Mthombeni uqokwe njengomdlali ovelele kulo mqhudelwano, wahlomula ngo-R1000.
I-Ezemvelo Cup iyingxenye
ezisetshenziswaUSamkelisiwe Mthombeni obe ngumdlali wesifazane oveleleINKANYEZIiMhlana Soccer teamyi-Ezemvelo ukufundisa imiphakathi
kwemvelo. Ethula inkulumo
yakhe uDkt Bandile Mkhize
onguMphathi oMkhulu weEzemvelo, unxenxe bonke
abebehambele lemidlalo ukuba babambe iqhaza ekongiweni kwemvelo.
“Kusukela namhlanje kumele
nibe ngamanxusa okongiwa
kwemvelo. Kumanje sinikeza
lezi zingane ezincane ithuba
lokukhombisa ikhono lazo,
kodwa ngeke sikwazi ukuqhubeka uma nina nihlulwa
wukuqonda ubumqoka bezilwane zasendle. Ngakho-ke
ngiyanicela ukuba nibike ngabo bonke abantu abalobizela
izimpondo zobhejane. Kumele
sibavikele obhejane kubazingeli ukuze babonwe isizukul-wane sangomuso,” kusho uMkhize.
Uqhube ngokubonga zonke
izinhlaka ezenze konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi
lo mqhudelwano uba yimpumelelo. Lo mqhudelwano
Super Stores, Nedbank, Ukhozi FM, Total, DBSA, Thanda
Private Game Reserve, AmaZulu FC neKatanga Parking
Le midlalo ibihanjelwe yizicukuthwane ezahlukene kanti
phakathi kwazo bekukhona
amaKhosi, iziNduna, amaKhansela kanye nezikhulu
zeSAFA ebeziholwa nguJeremiah “Ace” Mdlalose noKwenzakwakhe Ngwenya.uPhakamani Ngxongo obe ngumdlali webhola ovelele6Official NewsletterUMKHANKASO WOKUQWASHISA
HLABISAJabulani Ngubane - Ezemvelo KZN
Wildlife Co-ordinator of the
lwe-Ezemvelo KZN Wildlife ngokubambisana ne-WorldWildlife Fund (WWF), lusungule umkhankaso wokulwisana
nokubulawa kobhejane oluqale
mhla ziyisi-6 kuya kumhla ziyisi-7
kuZibandlela ka-2010. Inhloso
yalo mkhankaso bekungukufundisa, ukuqwashisa kanye
nokuxwayisa umphakathi ngezigameko zokuzingelwa kobhejane ezenzeka eduze kwawo.
Kusukela ngo-2008, sesinyuke kakhulu isibalo sobhejane
ababulewe ngenxa yokufunwa
kwezimpondo zabo kulesi siFundazwe. Lokhu kuholele ekutheni
i-Ezemvelo ne-Kruger National
Park babambe imihlangano eminingi yokubhunga ngokuphepha
koBhejane kanye nokuqhamuka
namaSu okuLwisana nokuZingelwa kwabo. UMnuz Jabulani
Ngubane uqokelwe ukudidiyela amaSu okuLwisana nokuZingelwa koBhejane okuhloswe
ngawo ukunciphisa isibalo sobhejane ababulawayo kanti lokhu
kungafezekiswa ngokuthi kugxiliswe ukusebenza komthetho,
kusimamiswe ubudlelwano nemiphakathi engomakhelwano
beziqiwi, kuqaliswe ngendlela
efanele izinhlelo zokuphenywa
kobugebengu, kugcinwe kahle
futhi kuhlolwe indawo yokulondolozwa kwezimpondo zobhejane.
Kulo mkhankaso kubonakale
abasebenzi boPhiko loKongiwa
kweMvelo yoMphakathi be-Nongoma
hambela izindawo zomphakathi
ezifana nama-Renki amatekisi,
amaDolobha kanye nezikole
bephethe amabhena okukhangisa. Kuphinde kwasatshalaliswa amabhukwana akhuluma
ngezinhlelo zokuwlisana nokuzingelwa kobhejane abhalwe
ngesiZulu kanye nangesiNgisi.
Obhejane bazingelwa ngenxa
yezimpondo zabo ezisetshenziselwa izizathu eziningi ezingaphusile. Izimpondo zobhejane
zithengiswa kakhulu eChina
kanye naseVietnam kanti isasasa
lokuthengwa kwazo liyanyuka
nakwamanye amazwe. E-Asia
izimpondo zobhejane zisetshenziselwa ukwenza imithi kanti eMiddle East, kuhlotshiswa ngazo
izibambo zezinsabula. UDkt Raj
Amin ongomunye wongoti bezimpondo zobhejane, ocwaningweni lwakhe uphethe ngokuthi
ukushumpulwa kophondo lukabhejane kufana nse nokunqanyulwa komunwe womuntu.
Akakwazanga ukucacisa ukuthi
ngabe izimpondo zobhejane
kukhona yini ezinakho okungasetshenziselwa ukwenza imithi. Umyalezo ovela oPhikweni
lwezoKongiwa kweMvelo yoMphakathi uthi, kungumthwalo
wabo bonke abantu baseNingizimu Afrika ukulwisana nobugebengu bokuzingelwa kobhejane.
Kuliqiniso okumele lihlale obala
ukuthi obhejane bayaphuza
ukuzala, ngakho-ke kuthatha
isikhathi eside kakhulu ukuthi
bande. Yingakho-ke kumqoka
ukuthi sivikele labo abasekhona
futhi sibabike labo bantu ababazingelayo.7ABEKHO ABAMINZILE
enhla neKwaZulu-Natali zincome ukubambisana okuhle
phakathi kwezinhlaka ezahlukahlukene eziqinisekise ukuthi
ziphephile ngesikhathi samaholidi kaKhisimuzi. Abantu ababalelwa ku-2000 bavakashele
eKosi Bay ngoKhisimuzi nangoNcibijane. Kuzona zombili
lezi zinsuku, akukho zigameko
ezibikwe emaphoyiseni kanti
futhi akekho okubikwe ukuthi
uminzile okuyizinkomba zokulawuleka kahle komphakathi
okwenziwe yi-Ezemvelo kanye
Ukuseshwa kwabantu esangweni kwenziwe ngokubambisana
phakathi kwe-SAPS ne-Ezemvelo. Izimoto ebezinotshwala
bezingavunyelwa ukuba ziye
eKosi Mouth ngaphandle kwalabo bashayeli abebevuma ukubukhipha ezimotweni. Imibiko eqinisekiswe ngabasebenzi beEzemvelo ikhomba ukuthi bonke
abantu abathutheleke eKosi
Mouth bebeziphethe kahle kakhulu.
Abantu ababalelwa ku-1000
eMdoni Camp ngosuku lukaKhisimuzi nangoNcibijane. Kubikwe isigameko esisodwa lapho
u-Cpl Simon Msweli ehlaselwe
khona yiqulu labantu abebedak-iwe behlome ngamabhodlela
otshwala abengenalutho kanti
kube khona ukudubula okubili
ngenhloso yokuthusa laba bantu. I-SAPS ibe isiqalisa uphenyo
kanti isimo siphinde sadamba
esikhathini esincane kwenzeke
lokhu. Kuvulwe icala esiteshini
samaphoyia aseManguzi ukuze
kuqhutshwe uphenyo. Kuphinde
kwavinjwa izikebhe ezimbili
ukuba zingene ngemuva kokuba
zingakwazanga ukuveza amalayisensi azigunyaza ukungena
ULeornard Zulu oyiMenenja
eBhekele oKongiwa kweMvelo
eKosi Bay, uncome kakhulu
iqhaza elibanjwe ngu-LT.Colonel S.D Mtshali ongumphathi
wesiteshi samaphoyisa aseManguzi noKaputeni wakulesi siteshi
u-B.J Tembe. Kumaholidi adlule
phakathi kwe-Ezemvelo neSAPS kodwa-ke manje sebakhe
ubudlelwano obuhle phakathi
kwabo. Uphinde wancoma
iMenenja kaMasipala namaKhansela endawo.
â&#x20AC;&#x153;Besingeke sikwazi ukwenza
wokulawula abantu ngaphandle kokuzikhandla, ukusebenzisa amakhono abo nokwesekwa
abasinikeze khona ngesikhathi
samaholidi,â&#x20AC;? kusho uZulu.Conservation, Partnerships & EcotourismUmfumfu - Uzibandlela 2010UMPHATHI OMKHULU WETHULE UHLELO
OLUSHA LOKUQEQESHWA KWABAQAPHI
BEMVELO BESIFAZANEI-Ezemvelo KZN Wildlife izoqalisa uhlelo lokuqeqeshwa
kwabaqaphi bemvelo besifazane kuphela kulo nyaka ka2011. Lokhu kudalulwe nguMphathi Omkhulu we-Ezemvelo
uDkt Bandile Mkhize emcimbini
beMvelo nabasebenzi as ebethathe umhlalaphasi obubanjelwe eGodeni Soccer Field, eHluhluwe-iMfolozi Park.
Isibalo esiphansi sabaqaphi
bemvelo besifazane abaqashwe
yi-Ezemvelo, yisona kanye esiqubule isidingo salolu hlelo. Kubaqaphi bemvelo abangama-26
abathole imiklomelo, uyedwakuphela owesifazane. UDkt
Mkhize uphinde wathi izinhlelo
ezijwayele ukusetshenziswa uma
kuqeqeshwa abaqaphi bemvelo,
ngoba kwesinye isikhathi bayaphoqeleka ukuqukula izinto ezisindayo okuba nzima kakhulu
kubona ukuba baqhubeke noqeqesho ngenxa yendlela ehlukile yokwakheka kwemizimba
yabo. Uphinde wagcizelela ukuthi uhlelo olusha ngeke luthambe
ukwedlula oluvele lukhona njengamanje.
UMkhize uphinde wexwayisa
abaqaphi bemvelo ngobungozi bokusebenzisa uphuzo
oludakayo kanye nezidakamizwa. Uthe lezi zenzo kazijivazi
labo baQaphi beMvelo abasuke
bezenza kuphela, kepha zijivaza
ngisho isithunzi senhlangano
yonkana. Ukuzwakalisa ukwamukela iziyalo zikaDkt Mkhize,
babe sebenza isifungo sokuzibophezela emsebenzini wabo
futhi babe sebephawula nangokwanda kwezinselelo ezihlangabezana nabantu abasebenza
kwemvelo nokuyilapho kugqamekhona inselelo enkulu yokubhekana nesihlava sokuzingelwa kobhejane ngokungemthetho. Baphinde bazibophezela, egameni
labo bonke abantu abasemkhakheni wokongiwa kwemvelo,
abakhona kanye nabangasekho,
ekutheni bazokwenza konke
okusemandleni ukuvikela imvelo.
Ukuncipha kwezigameko zokuzingelwa kobhejane eziqiwini
ze-Ezemvelo kufezekiswe ukuzibophezela kwalaba baQaphi
UmQaphi weMvelo ovelele,
oqokwe ngozakwabo kube
Nkwanyana. Abalale ngemuva kwakhe kube ngoMnuz Jabulani
Ntombela, Mnuz Velenkosini
Ntombela noMnuz Lindani Gebashe. Bonke laba baQaphi
beMvelo baklonyeliswe ngezindondo ngenhloso yokubabonga
ngokuzinikela kwabo emsebenzini.
Ubumnandi bebuthe chithi saka!
Ukumasha kwalaba baqaphi
bemvelo kushiye izithameli zibambe ongezansi. UMnuz K
Zungu ongumdlali wesigingcineqembu lakhe, bashiye izithambeli zisafuna impinda. Abantu
bazwakalise okukhulu ukudumala bezwa ukuthi uMnuz Zungu
akakabi necwecwe eseliqoshiwe
njengoba iqembu lakhe linethalente elihle kangaka. Indlela
kaMnuz Zungu yokuphetha
umculo yehlukile kwezijwayelekile, ngoba eyakhe ihambisana
emshinini wokwandisa umsindo
kanye nokutshakadula uma esevala kanti-ke akaziphoxanga
izithameli zalo mcimbi ebeziyilindele ngabomvu indlela yakhe
Kulo mcimbi kuphindwe kwavaleliswa uMnuz C Mfeka osethathe
umhlalaphansi. Isipiliyoni sakhe
kanye nokuzinikela abenako
emsebenzini abewenza kuyohlezi kukhumbuleka kozakwabo
abebambisene nabo. Simfisela
okuhle kodwa kumhlala phansi
wakhe ngethemba lokuthi usazoqhubeka nokutshala izeluleko
kubaQaphi beMvelo abasebasha
njengomuntu osenolwazi olunzulu aluthole eminyekeni eminingi edlule ekulo msebenzi.Field Rangers Awards â&#x20AC;&#x201C; Hluhluwe iMfolozi ParkINKANYEZI8Official NewsletterAbakwa-Mondi Paper kanye nabakwaWaltons belule isandla emkhankasweni
wokulwisana nokuzingelwa koBhejane
AbakwaMondi nabakwa-Waltons bajoyine i-Ezemvelo KZN Wildlife emkhankasweni wokulwa nokuzingelwa kobhejane ngoMfumfu onyakeni odlule.
Kusukela kwesobunxele nguDary Nossiter oyiMenenja yezokuKhingisa kwaMondi, ngu-Obert Mandimutsira oyiNhloko yoPhiko lwezokuKhangisa,
ukumaKetha kanye ne-Logistic kwaMondi, nguMike Frizelle ongumQondisi oPhethe kwa-Waltons, uDkt Bandile Mkhize onguMphathi oMkhulu
wezeMvelo kanye noDan Chlorboli ongumQondisi woPhiko wezokumaKetha kwa-Waltons.Inkampani
ekhengisa amaphepha isijoyine umkhankaso wokulwisana nesihlava sokuzingelwa
Lokhu kudalulwe emcimbini
lapho abakwaMondi nabakwaWaltons bebememezela khona
ukuthi bazoxhasa ngemali iEzemvelo KZN Wildlife. Imali
abazolekelela ngayo ngezotholakala ngokuthengiswa kweRotatrim Green Line Paper, kanti
lo mcimbi ububanjelwe e-Kloof
ngenyanga kaMfumfu onyakeni
Izitolo zakwa-Waltons zizophanyeka imidwebo ezoheha
amakhasimende abo ukuze azi
kabanzi ngesihlava sokubulawa kobhejane futhi ifundise
ngezinhlelo zokulwisana nokuzingelwa kwabo.
Imali ezotholakala lapho izosetshenziselwa izinhlelo zoqeqesho
kanye nezokuvikelwa kobhejane.
Abakwa-Waltons bafisa ukudayisa amaphepha akwaMondi
amaningi kakhulu ukuze babambe iqhaza elibonakalayo
ekulweni nokuzingelwa kobhejane kanye nokulekelela ekuqeqeshweni kwabaqaphi bemvelo.
Abakwa-Waltons bawubonaumncane kakhulu umnikelo
abazimisele ngokuwufaka ekufuqweni kwezinhlelo zokulwisana nokuzingelwa kobhejane.
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule,
zikhule ngendlela ebabazekayo
izigameko zokuzingelwa kobhejane ezingxenyeni ezahlukene
zezwe okubalwa kuzona i-Kwazulu-Natali, i-North West, iLimpompo ngokunjalo neGauteng,
okudlange kuzona lo mkhuba.
Kubulawe obhejane abangama-200 ngesikhathi kwenzeka
lezi zigameko kanti bebetholakala bengasenazimpondo.
“Kuzokuba nenqwaba yezinsuku zokuncintisana nyanga
zonke ezitolo zakwa-Waltons
lapho kuzokhishwa khona umSebenzi odayise amaphepha
amaningi kunabanye. Phakathi
ngozonqoba kukhona neholidi
lokuyongcebeleka kwesinye seziqiwi ze-Ezemvelo,” kusho uMike
Frozalle onguMqondisi oPhethe
U-Obert Mandimutsira oyiNhloko yoPhiko lwezokuThengisa, ukuMaketha kanye neLogistics kwa-Mondi wengeze
ngokuthi inkampani yakhe ijabule kakhulu ngokuthola ithuba
lokubamba iqhaza kulo mkhan-9kaso wokulwisana nokuzingelwa
ngokungemthetho kwalezi zilwane kuyinkinga enkulu. Lo
mkhankaso kumele uqale emakhaya kanti umuntu othenga
amaphepha uzothola ibhukwana ngaphezulu lokumqwashisa
futhi kuzokwenziwa isiqiniseko
sokuthi ubamba iqhaza kulo
UDkt Bandile Mkhize onguMphathi Omkhulu we-Ezemvelo
ngalezi zigameko kanti ube
esethi lokhu kumele kuthinte
bonke abantu abathanda imvelo
ukuba balwisane nalo mkhuba.
“Sidinga osomabhizinisi abaningi ukuba baphonse esivivaneni
kulo mkhankaso wokulwisana
nokuzingelwa kobhejane,” kusho
Ngesikhathi enza izethulo kulo
mcimbi uDkt Mkhize, ubalule
ukuthi kutholakale izimpondo
zobhejane eziyisi-7 eLimpopo
kanti usoMnotho uveze ukuthi
zingadayisa itshe lemali eVietnam.
Ngonyaka ka-2009 ibe ngu-19
409 imikhombe ebulewe kanti
bangu-1 678 obhejane kodwake e-Kruger National Parkizinkomba zithi akubulawanga
nowodwa khona ngenxa yokuthi
bebeqwashe kakhulu. Phakathi
kukaMasingana noMandulo ku2010, kubulawe obhejane abangama-23 KwaZulu-Natali kanye
nabangama-82 e-Kruger National Park okuyisibalo esiphezulu
UMkhize uphinde wathi kungenzeka ukuthi iNgqungquthela
yokuQhamuka namaSu okubhekana nalesi sihlava, ibihanjelwe ngezinye zalezi zigila mkhuba
kwazise abebeyingxenye yayo
Maningi amathuba okuthi lezi
zigebengu zisizwe ngabantu
abasebenza ngaphakathi eziqiwini ezinezilwane kanye nalezo
Ngonyaka ka-2010 uwodwa nje
kubulawe obhejane ababalelwa
ku-220 kanti bekunezinkomba
zokuthi kungase kubulawe abanye abangu-112 ungakasongwa
Izinkomba zithi kuzozingelwa
obhejane abangu-1800 ngonyaka okuchaza ukuthi ngu-9%
wobhejane abakhona njengamanje ozobulawa.Conservation, Partnerships & EcotourismUmfumfu - Uzibandlela 2010AbezeMvelo baxhasa
abafundi basemaNyuvesiUmfundi osemncane uThandeka Mthembu (12) waseMaputa Community
School emukela isipho kuMphathi oMkhulu wezeMvelo, uDkt Bandile
Mkhize.INkosi Mabhudu Tembe yemukela isheke lesikhwama somfundaze iTembe
Traditional Council Bursary kuMphathi oMkhulu, uDkt Bandile Mkhize.Sizwe sakwaTembe, KwaNgwanase sithole uxhaso kwabezeMvelo KZN Wildlife
lokusiza abafundi abafuna ukuyoqhuba izifundo zabo ezikhungweni zemfundo ephakeme. Lolu
xhaso lunikezelwe emcimbini
obuwenzelwe ehholo leSizwe
saKwaTembe ngoLwezi ka-2010.
Umnikelo ka-R200 000 okhishwe
yi-Ezemvelo KZN Wildlife nge-kho iNkosi yaqhamuka nale lisu
ukuze abafundi bafunde ezikhungweni zemfundo ephakeme
babuye bazothuthukisa indawo
“Lesi kwakuyisifiso sikababa
wami uMzimba Tembe osakhothama, ukuba kukhuthalelwe
ezemfundo endaweni yakwaTembe,” kusho iNkosi Tembe.
Lo mcimbi ubuhanjelwe ngaban-Isandla soMphathi Omkhulu uDkt
Bandile Mkhize, uzokwelekelela
abafundi beSizwe seNkosi uMabhudu Tembe. Lesi sikhwama
esaziwa ngeTembe Traditional
Council Bursary Scheme, sasungulwa yiNkosi uqobo lwayo kanti
sesisize izingane ezevile emashumini amahlanu.
Le ndawo intula izinto eziningi eziyingqalasizinda yinga-tu bemikhakha eminingi nabo
abathembise ukufaka isandla
esikhwameni. Umfundi osemncane uThandeka Mthembu
(12) ofunda u-Grade 6 eMaputa
Community School, uhlabe umxhwele izihambeli zalo mcimbi
ngenkondlo ayiqambile wayihaya exwayisa abantu ngobungozi
ngokungemthetho. UDkt Mkhize
kuze kube uyaphothula
nomndeni wakhe ayobona isiqiwi iHluhluwe-iMfolozi Park.
benikele ngokudla.Ingxenye yabafundi abasohlelweni lokuhlomula esikhwameni seTembe Traditional Council Bursary. Abamile uNonhlanhla
Mntambo owenza iziqu ze-Bachelor of Art Formative e-University of Zululand, uZanele Mthembu noNtombifuthi Tembe
abenza iziqu ze-Bachelor of Education e-University of Zululand, uKhethiwe Gumede owenza iziqu ze-Information
Technology e-DUT, uSibusiso Makhanya owenza iziqu ze-Transport Management e University of Zululand, uHloniphile
Tembe owenza iziqu ze-Transport and Logistics Management e-University of Zululand, uThandeka Nhlozi owenza iziqu
ze-Bachelor of Science e-Wits University, uBanele Biyela owenza iziqu ze-Cost and Management Accounting e-University
of Zululand, (kwabaguqile) uThobekile Gumede owenza iziqu ze-Physiotherapy e-University of KwaZulu Natal kanye
noThulani Ntuli owenza eze-Bachelor of Commerce e-University of Zululand.INKANYEZI10Official NewsletterI-EZEMVELO ISAYINE
ISIVUMELWANO SOKUPHATHA NGOKUBAMBISANA NEMIPHAKATHILUNCONYWE KAKHULU
KWEZIBAYAUDkt Bandile Mkhize onguMphathi oMkhulu wezeMvelo, iNkosi Mabhudu
Tembe, iNkosi Mzamo Buthelezi (ofake iyembe elisasibhakabhaka), omele
umphakathi waseThala, u-MEC wezoLimo, ezeMvelo nokuThuthukiswa
kweMiphakathi yaseMakhaya uNkk Lydia Johnson, iNkosi Bhekumuzi
Zulu, u-P.D Mhlaba omele umphakathi waseHluhluwe kanye noClement
Mpontshane waseNdumo.I-Ezemvelo KZN Wildlife
iziqiwi ngokubambisana nemiphakathi eyahlukene eyasuswa
ngendluzula ngesikhathi kusungulwa iziqiwi.
Lesi sivumelwano okungesokuqala phakathi kweziqiwi eziphethwe yi-Ezemvelo namaTrustees amele imiphakathi,
sibandakanya iTembe Elephant
Park, iNdumo Game Reserve
iHluhluwe-iMfolozi Park kanye
neThala Game Reserve.
Umcimbi wokusayinwa kwesivumelwano
kaZibandlela eCentenary Centre phakathi eHluhluwe-iMfolozi Park. Lesi sivumelwano
sizonikeza imiphakathi ithuba
ne-Ezemvelo ezinye iziqiwi esiFundazweni saKwaZulu-Natali.
Ukusayinwa kwalesi sivumelwano kulandela isibophezelo
imindeni eyasuswa ezindaweni
zayo ngesikhathi kusungulwa
Eminye imindeni isiqalile ukuthola o-R10 000 bezinxephezelo. Lo
mcimbi ubuhanjelwe yizicukuthwane eziningi ezahlukene kubandakanya u-MEC wezoLimo,
ezeMvelo kanye nokuThuthukiswa kweMiphakathi yaseMa-khaya uNkk Lydia Johnson namaKhosi abevela emiphakathini
kusayinwa lesi sivumelwano.
“Ukongiwa kwemvelo manje sekuguqukile embonweni
obekukade kugxile kuwona
nezindawo zokongiwa kwemvelo ngezinhloso zezokungcebeleka nokuvikelwa kwezitshalo
nempilo yezilwane, kodwa
manje sekugxile embonweni
wokuthi ukongiwa kwemvelo kuhambisane nokuphathwa kahle
kwamagugu emvelo okuqinisekisa ukuvikelwa nokungashabalali
kwezinhlobo ngezinhlobo zezinto eziyingxenye yemvelo yethu,”
kusho u-MEC uLydia Johnson
Ikhuluma egameni lamaKhosi
iNkosi Mzamo Buthelezi yaseMbongombongweni, income kakhulu zonke izinhlaka ezibambe
iqhaza futhi yagcizelela ukuthi
imiphakathi yabo izibophezele
UMphathi oMkhulu we-Ezemvelo uDkt Bandile Mkhize,
uzwakalise okukhulu ukujabula
ebona kusayinwa lesi sivumelwano. Uphinde wagcizelela
nemiphakathi ngenhloso yokusimamisa ukongiwa kwemvelo
esiFundazweni.11ABASEBENZI bezeMvelo bavakashele imiphakathi ehlomulile ohlelweni
lokwakhiwa kwezibaya. Ngenhla nguMphathi Omkhulu uDkt Bandile
Mkhize kanye no Khoyo Buthelezi ongomunye wabahlomulile kuloluhleloI-Ezemvelo KZN Wildlife ihlangabezane ngokushesha nezikhalazo
zemiphakathi eyakhele iHluhluwe-iMfolozi Park ebikhala ngokuthi
izilwane zasendle ezifana nengwe zizingela imfuyo yawo.
Ithimba le-Ezemvelo ebeliholwa nguMphathi oMkhulu uDkt Bandile
Mkhize, livakashele umndeni waKwaButhelezi owakhe ngaphandle
kwesiqiwi ngoLwesithathu lomhla ziyi-15 kuZibandlela ka-2010, ukuthola kuwona ukuthi ngabe lusebenza kahle yini lolu hlelo.
UKhoyo Buthelezi ongomunye wamalungu omphakathi ahlomulile
ohlelweli lokwakhiwa kwezibaya, uzwakalise okukhulu ukujabula ngabakwenzelwe yi-Ezemvelo.
“Isibaya sivikeleke kahle kakhulu kanti manje imfuyo yethu isiphephile. Selokhu ngakhelwa lesi sibaya, kayikho neyodwa imfuyo yami
esike yadliwa yizilwane ezizingelayo. Yize kunjalo, kodwa ngisakhala
ngokuthi i-Ezemvelo ayikaze isinxephezele ngokudliwa kwemfuyo
yethu,” kusho uButhelezi.
Uqhube ngokucela i-Ezemvelo ukuba imhlinzeke ngocingo lokubiya isivande sakhe, abesisebenzisa ukondla umndeni wakhe. UDkt
Mkhize ujabule kakhulu ezwa ukuthi uhlelo lokwakha izibaya luthela
“Ngiyajabula Shenge ngoba manje imfuyo yakho isivikelekile. Kuseqhulwini kithina njenge-Ezemvelo ukusebenzisana nemiphakathi
eyakhele iziqiwi zethu. Odabeni locingo, ngiphakamisa ukuba uxhumane neNgonyama Trust Board ukuze uthole ukucaciseleka kahle kanye nosizo. Kodwa-ke kumele uqale eNkosini yakho okuyiyona
ezocela iBhodi ukuba ibiye isivande sakho. Ibhodi ivele ilinde izicelo
zalolo hlobo, ngakho-ke kumele ulisebenzise leli thuba,” kusho uMkhize.
Ucingo lwezibaya lucije ngokwanele ukugwema ukuthi izilwane ezizingelayo zingene ngaphakathi futhi lude kakhulu, okuyizinkomba
zokuthi luvikelekile. UMkhize ugcizelele ukuthi i-Ezemvelo izoqhubeka nalolu hlelo ukuqinisekisa ukuthi imfuyo iphephile ezilwaneni ezizingelayo.Conservation, Partnerships & EcotourismUmfumfu - Uzibandlela 2010BAVUNA IZITHELO
Umphakathi waseMbongombongweni eLouwsberg
ngaphansi kweNkosi Mzamo Buthelezi uhlomule ngeloli
elingamathani ali-10 elibiza u-R950 000 livela kwabeEzemvelo KZN Wildlife ohlelweni lweMali yesiVivane
soMphakathi etholakale eThala Game Reserve. Ngaphezu
kwaleli loli, lo mphakathi uphinde wagixabezwa ngo-R728
869.00 obekelwe umshwayilensi, izindleko zebhizinisi
kanye nokukhokhela umshayeli weloli. Leli loli lizophucula
impilo emphakathini njengoba ukhahlanyezwe yindlala
kanye nokushoda kwemisebenzi.
INkosi uMzamo Buthelezi kanye no Dkt Bandile MkhizeUSâ&#x20AC;&#x2122;phelele Luthuli oyiMenenja yoPhiko
lwezokuKhangisa kwa-Ezemvelo noMphathi siTeshi
woKhozi FM uBonga Mpanza ngesikhathi uKhozi
lusakaza bukhoma eMlalazi Nature Reserve
U-Lance Corporal-Lindani Gebashe, u-Lance Corporal-Jabulani
Nkwanyana (obaqwaqwade emakhanda), uMphathi oMkhuluuDkt Bandile Mkhize, uMqaphi weMvelo-uJabulani Ntombela
kanye noVelenkosini Ntombela onguMqaphi weMvelo emcimbini
wokuklonyeliswa kwabaQaphi beMvelo eHluhluwe-iMfolozi ParkUSâ&#x20AC;&#x2122;busiso Myeni
eMlalaziBekungekho ukuphumula kubasebenzi basoGwini (iThimba
laseMlalazi) ngesikhathi samaholidi kaKhisimuzi. Ithimba
le-WFTC belisebenza kanzima likhuculula imfucuza endaweni
obekubanjelwe kuyona umkhankaso libambisene noDkt Bandile
Mkhize obevakashe eMlalazi lapho bekusakaza khona bukhoma
uKhozi FM, obekuhloswe ngakho ukugqugquzela izivakashi
ukuhambela eMlalazi Nature Reserve.INKANYEZI12All pages:23456789101112InfoSaveLikeShareDownloadMoreEzemvelo mag zulu Published on Aug 15, 2013 marcrussellabbottFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore